एनएमबि बैंकको यातायात जगतमा डिजीटल भुक्तानीमा फड्को – News Dainik
रश्मी १६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १६:३० बैंकिङ्ग प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले यातायात जगतमा डिजिटल भुक्तानी च्यानल प्रबद्र्घन गर्न एन–क्लाउड प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
उक्त सम्झौताले सम्पर्क रहित कार्ड र पिओएस (एइक्) टर्मिनलहरूको माध्यमबाट सार्वजनिक यातायातहरूमा डिजिटल भुक्तानी संकलन प्रणाली लागु गर्नेछ ।
यस परियोजनाको शुरुवात किपु बस सेवा प्रा.लि. सँग हुनेछ जहाँ यात्रुहरूले बस भाडा कार्डको प्रयोग गरी सम्पर्क रहित भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । समझदारीपत्रमा एनएमबि बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृ सुनिल के.सी. र एन–क्लाउडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र नारायण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।
अघिल्लॊ बाबुआमालाई खुकुरी हानी घाइते बनाउनेलाई पक्राउ
पछिल्लॊ थप २२४ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमित संख्या १९ हजार ७ सय ७१ जना पु्ग्यो
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले कोरोना कोषलाई दुई करोड ६७ लाख २७ हजार ९ सय २९ …